Momba anay - Yiwu Shunshui Ltd.
Glovehat.com ny SS (YIWU SHUN SHUI LTD) dia mpitarika amin'ny ririnina kojakoja ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Orinasa mitokana izahay izay mamatsy ireo mpivarotra zava-mahadomelina lehibe indrindra any Etazonia sy Eropa sns.
Ny ekipanay matihanina dia manana traikefa mitambatra mandritra ny 16 taona. Izahay dia manao izany fahalalana izany ho anao amin'ny alàlan'ny fanolorana vokatra avo lenta amin'ny vidiny mety indrindra amin'ny serivisy ahafahan'ny mpanjifanay miavaka amin'ny fifaninanana.
Izahay dia mitantana ny lafiny rehetra amin'ny rojo famatsiana (fampiroboroboana ny vokatra, famolavolana, fampidirana, famokarana, fifehezana kalitao, fitsapana, fanafarana, famafana ny fadin-tseranana, fanodinana entana ary fanaterana.)
Manolotra dingana iray manontolo izahay:
Fahatokiana kalitao A hatramin'ny Z
Mba hanolorana karazana kalitao avo lenta, manavao, mahazatra mba hampitomboana ny varotra sy ny sisiny. Izahay no tsara indrindra amin'ny asa aman-draharaha miaraka amin'ny traikefa malalaka sy voadio sy fanoloran-tena ho an'ny
mpiara-miasa amin'ny indostrian'ny magazay mpanafatra sy Chain.